Saran'ny fandefasana | Ny fanafarana ny fiarako
Ohatrinona ny vidin'ny fandefasana fiara?
Miankina amin'ny toerana misy ny fiaran'izao tontolo izao ny vidin'ny fandefasana. Saingy ny karazana fandefasana ampiasaina dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny vidin'ny fanafarana. Ny teny nindraminay dia nalahatra tamin'ny filanao manokana.
Aiza ny fiarananao?
Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny halaviran'ny fiara no mahaloa azy.
Ny firenena sasany toa an'i Etazonia dia lafo kokoa raha ny fandefasana avy any amin'ny morontsiraka Andrefana sy ny morontsiraka atsinanana ary toy izany koa ho an'ny firenena hafa izay entina any amin'ny seranana tsy dia be mpampiasa intsony ny fiara.
Manana ny lisitry ny seranan-tsambo mora vidy indrindra izahay ary mamindra ny fiaranay mankany amin'ny iray amin'ireo toerana ireo mba hahazoana antoka fa hampiasa ny làlan'ny fitaterana mahomby indrindra.
Raha azo atao dia alefa miaraka amin'ny fiara hafa ny fiaranao mba hanomezana vola sarobidy indrindra. Miara-miasa akaiky amin'ireo mpiara-miasa aminay koa izahay mba hahitana anao ny vidiny mety indrindra rehefa mandefa ny fiaranao.
Noho ny isan'ny fiara alefantsika avy amin'ny karazana seranan-tsambo marobe dia hanamafy hatrany izahay raha azo atao.
Ny Car Import ho orinasa dia manolotra serivisy fisoratana am-baravarana tanteraka ka manandrana mitazona ny vidiny ambany araka izay tratra ho anao izahay.
Mandany vola ve?
Ny firenena sasany toa an'i Afrika atsimo dia mitaky asa bebe kokoa hanadiovana ilay fiara. Ity dia vidiny izay mety tsy ho noheverinao rehefa nanapa-kevitra ny handefa ny fiaranao mankany United Kingdom ianao.
Manana tambajotra mpiara-miasa amin'ny ladoany afaka manampy amin'ireto fizotrany ireto izahay.
Ohatrinona no haba aloanao?
Ny fandefasana ny fiara dia ao anatin'ny vola lany amin'ny fitondrana fiara any Angletera fa mety misy fepetra takiana mba handoavana hetra fanampiny ho an'ilay fiara.
Manafatra avy any Eropa
Raha mitondra fiara faharoa any UK ianao avy ao anatin'ny EU dia tsy maintsy mandoa VAT ianao raha tsy mitondra ny fiara any Angletera amin'ny alàlan'ny tetika ToR. Tsy mila mandoa adidy ianao, ary ho an'ny fiara, mihoatra ny telopolo taona ny singa VAT dia ahena ho 5%.
Talohan'ny Brexit dia nisy ny fivezivezena maimaimpoana amin'ny entana, saingy tsy mihatra izany satria nandao ny Vondrona eropeana i United Kingdom hatramin'ny Janoary 2021.
Fanafarana avy any ivelan'i Eropa
Mifindra any UK - Raha mifindra any Angletera ianao ary te hitondra ny fiara miaraka aminao dia tsy mila mandoa didy na VAT. Ity dia manome anao manana ny fiara mandritra ny 6 volana mahery ary nipetraka tany ivelan'ny EU nandritra ny 12 volana. Izahay dia mila ny faktiora amin'ny fividianana anao na ny antontan-taratasinao mba hanaporofoana ny halavan'ny fananan'ny fiara sy ny volavolan-dalàna momba ny fampiasana 12 volana, ny fanambaràn'ny banky na ny fifanarahana fividianana / fampanofana trano hanaporofoana ny halavan'ny fotoana nonenanao teto amin'ny firenena.
Fiara kilasika efa mihoatra ny 30 taona
Tamin'ny 2010 dia nisy tranga mari-pandresena iray nandresena ny HMRC izay nanova ny lalàna momba ny fomba fanafarana fiara mihoatra ny 30 taona. Amin'ny ankapobeny ny fiara izay amin'ny fomban'izy ireo tany am-boalohany, tsy misy fanovana lehibe amin'ny chassis, ny familiana na ny braking system ary ny motera, farafahakeliny 30 taona, ary ny maodely na ny karazany izay tsy eo am-pamokarana intsony dia hiditra eo ambanin'ny taha zoro nol. adidy sy VAT 5%.
Raha namboarina ny fiara talohan'ny 1950 dia niditra ho azy izy ireo amin'ny taha manan-tantara amin'ny sanda aotra sy 5% VAT.
Fanafarana fiara latsaky ny 30 taona
Namboarina ivelan'ny EU - Raha manafatra fiara avy any ivelan'ny Vondrona Eropeana (EU) ianao izay natsangana ivelan'ny UE dia takiana aminao ny handoa hetra 10% sy VAT 20% mba hamoahana izany amin'ny fadin-tseranana any UK. Io dia isaina amin'ny sandam-bola nividiananao ny fiara ao amin'ny firenena izay anafaranao azy.
Vita ao anatin'ny EU - Raha manafatra fiara avy any ivelan'ny EU ianao, izay natsangana tany amin'ny EU ohatra, dia Porsche 911 natsangana tao Stuttgart, Alemana. Tsy maintsy mandoa taha ambany ianao: £ 50 ary avy eo 20% VAT hahafahana mamoaka azy amin'ny fadin-tseranana any UK.